Hoteel Casri ah oo magaalada Muqdisho dhismihiisa laga wado(sawiro) – Xeernews24
Hoteel Casri ah oo magaalada Muqdisho dhismihiisa laga wado(sawiro)
10. Juli 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Dire-dhaba(XeerNews)Hoteel caanka ahaa Muqdisho oo loo bedelay suuqyada casriga ah ee laga adeegto. Huteelkan oo la oran jirey Coregge Del-Sud oo ku yiilay degmada Xamar-weyne ee gobolka Banaadir agagaarka Shineemo Xamar ayaa waxaa loo bedelay carwo casri ah.
Carwadan oo la mid ah kuwa caalamka ugu waaweyn ayaa waxaa ka socday mudooyinkan dhisme casri ah, waxayna ka kooban tahay dhowr dabaq oo loo sameeyey wiishash iyo Jaranjarooyinka socda iyadoo noqotay carwadii ugu horeysey ee adeegaas leh dalka Somalia.
Dhismaha carwadan oo ay maalgelinayaan ganacsato Soomaali ah ayaa maraya heer gebogebo, iyadoo la filayo in dhowaan xariga laga jaro, waxaana carwadan ay soo jiidatay indhaha dad badan oo Soomaaliyeed.
Magaalada Muqdisho ayaa sanadahan dambe ku talaabsaneysay horumar ganacsi iyo dib u dhis ay wadaan ganacsato iyo qurba joog Soomaali ah taasoo muujineysa in magaalada ay hadda cagta saartay wadadii nabada ka dib sanado badan oo halakeeyeen dagaalo wejiyo kala duwa lahaa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/Hotel.png 183 276 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-07-10 20:53:152016-07-11 20:24:34Hoteel Casri ah oo magaalada Muqdisho dhismihiisa laga wado(sawiro)
Wax ka dhageyso Guulihii iyo faaidooyinkii madaxwaynaha Dalka Turkiga Rajab... Cawaaqib xumada Cilmaaniyadda